Agbamakwụkwọ edo edo 2018 - ogologo oge, mkpụmkpụ, ọkara, na akwa, na ákwà mkpuchi, na okpueze, na ajị anụ, bun, na ntutu isi
Agbamakwụkwọ edo edo 2018 - 58 foto nke kachasị mma nhọrọ maka nwunye
Ndị na-eto eto na-amalite ịkwadebe maka ụbọchị kachasị mkpa nke ndụ ha, jiri nlezianya tụlee ihe agbamakwụkwọ ahụ na ịṅa ntị n'ihe niile. N'otu oge maka ụmụ agbọghọ ọ dị ezigbo mkpa ime ka a mara mma edozi isi nke ga-eme ka ụta mara mma ma nụchaa. Agbamakwụkwọ edo edo 2018 dị iche iche, n'ihi ya ịhọrọ onye ziri ezi agaghị esiri ike.
Agbamakwụkwọ edo edo 2018 - ejiji ejiji
Ezi edozi isi maka agbamakwụkwọ nke 2018 kwesịrị ịma mma ma mara mma. N'iji otu ejiji agbamakwụkwọ mara mma , ha kwesịrị ikwu okwu banyere ndị na-eto eto na-enwe mmasị zuru oke nke nwanyị, nwunye ya, romanticism na ihe omimi. Ọ bụ ezie na ejiji nke oge a emeela mgbanwe dị ka onyinyo nke ụmụ agbọghọ na-abanye n'ime alụmdi na nwunye maka oge mbụ ma ọ bụ ugboro ugboro, nna ukwu nke ọrụ ntutu isi nke afọ a ahapụbeghị ihe ndị oge ochie nke na-ahapụbeghị ọnọdụ ha ruo ọtụtụ afọ.
Agbamakwụkwọ edozi maka ogologo ntutu 2018
Ndị nwere obi ụtọ nke ogologo oge ogologo oge nwere ike imeli nhọrọ ọ bụla. Ka ọ dịgodị, mgbe ị na-ahọrọ usoro ịme ntutu, ọ dị mkpa iburu n'uche njirimara nke ọdịdị. Ya mere, umuaka ndi nwere uzo uzo na iru uzo aghaghi imeputa isi ihe di iche iche di iche iche, ndi nwe ya ga echekwa ihu elu na nna.
Uwe eji edozi agbamakwụkwọ ejiji 2018 maka ogologo ntutu isi na-etolite na nhọrọ ndị a:
ụdị ihe niile dị iche iche nwere oke osisi, nke nwere ike ịdị ogologo, oblique na asymmetrical. Ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ na nke a, dị ka iwu, nkwụsị na agba ma ọ bụ na-ebili ma na-edozi ya site na nkwonkwo na-enweghị aka;
elu bundle. Na ụdị edo edo agbamakwụkwọ dị otú ahụ 2018 adịghị ka ọ na-agwụ ike, ha na-eji ihe ịchọ mma mara mma ma mara mma;
otu n'ime ihe dị iche iche nke ntinye na mbụ bụ otu ùkwù nke curls curl, nke, Otú ọ dị, enweghị ike ịgbatị ọkụ;
ọdịdị ndị inyom na nke ịhụnanya ga-adị ka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke oge 2018 na ụdị Grik, nke a na-ejikọta ya;
ndị nwe ogologo oge nwere ike igosi ịma mma ha, na-ahapụ ha ka ha gbazee. N'afọ 2018, a ghaghị ịkwado ha n'arụghị oke curls;
otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị nke oge na-abịanụ, nke dịịrị ndị nwe ogologo oge, bụ nhọrọ dịgasị iche iche na mgbatị. Akpọrọchi na-etinye n'akụkụ, ọ bụghị naanị nkecha na nke mara mma, ma nke mbụ;
na ọnụ ọgụgụ kachasị mma nke taa na ụdị edo edo edo edo edo 2018 na okooko osisi ọhụrụ. Maka ndị nwe ogologo curls, nhọrọ kachasị mma bụ akara ma ọ bụ obere placers;
agba okpuru gbara okpuru gbara afo a dara n'ala. Maka ụmụ nwanyị nwere ntutu isi, nhọrọ kachasị mma ga-abụ otu nnukwu obi ike, nke ga-enye onyinyo nwanyị, ịhụnanya na ịdị mma. Dịka, maka ịmepụta ụdị edozi ahụ, a na-eji usoro French ma ọ bụ "spikelet" a ma ama. Ọ bụrụ na achọrọ, enwere ike ịme ihe a gburugburu, nke ga-eme ka mmetụta okpueze.
Ụzọ edozi edozi maka edozi isi 2018
Uwe ejiji maka agbamakwụkwọ na ọkara ntutu 2018 na-adịghịkwa ma ọlị. Ya mere, ha nwere ike itinye ya n'osisi ma ọ bụ ụbụrụ, mee ka ha nwee ụta mara mma, ọkpụkpụ ma ọ bụ obere nwa. Na mgbakwunye, n'oge a, ndị na-ejiri ihe na-eme ihe na-eme ka ndị mmadụ nwee obi ike, nke na-adọrọ mmasị na ụlọ ahụ. Ọ dịghị obere ọdụm dị mkpa ma dị mfe, a na-eji ya chọọ ya dị iche iche.
Na-emekarị nke oge na-abịa na retro ịke . Ntutu ihu nke ogologo oge dị mma maka ịmepụta mmetụta dị nfe na oge ochie, nke na-ele anya dị oke uru n'ogo ahụ na ntutu ma ọ bụ mkpuchi, coquettishly kpuchie ihu ihu. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji ụyọkọ, hoops, bandeeji, combs, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ka ochicho mma maka nhọrọ a.
Agbamakwụkwọ edozi maka obere ntutu 2018
Ndị nwere oghere dị mkpirikpi ịhọrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị nwere ike isi ike. Ka ọ dị ugbu a, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe na-adọrọ mmasị na nke mbụ na nke a. Ya mere, ejiji edo edo edozi ejiji 2018 n'ihi na isi ntutu isi na-enwe ọdịdị nke oge, dịka ọmụmaatụ, bean ma ọ bụ oghere dị mkpirikpi, yana ihe dị iche iche dị iche iche dị n'akụkụ akụkụ, obere curls ma ọ bụ ọnụ ụlọ dị n'akụkụ.
Na nke ọ bụla, edo edo edo edo edo edo 2018 maka obere curls ga - ejikọta ya na ngwa ngwa - obere okpu ma ọ bụ ákwà mgbochi, ákwà mkpuchi dị nwayọ na nke dị nkenke, ọmarịcha mma nke okooko osisi ma ọ bụ artificial. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na nwa agbọghọ nwere ntutu dị mkpụmkpụ, ọ nwere ike ịgbakwunye ihe oyiyi ya ma ọ bụ ihe mkpuchi.
Wedding edozi isi, ejiji 2018
Uwe eji edozi agbamakwụkwọ ejiji 2018 n'ihi na ihe ka ọtụtụ n'ime ha mebiri n'ime nnukwu ewu ewu ruo ogologo oge. E kere ha niile site n'enyemaka nke oge ochie na inwe ọdịdị mara mma ma mara mma. Ka ọ dịgodị, oge na-abịa, dị ka ndị niile gara aga, wetara ya usoro ọhụrụ zuru ezu, nke na-adịbeghị anya na-esiri ike ịhụ.
Ihe omuma nke edo edo edo edo edo edo di na 2018 bu ihe nlere anya, nke adighi anabata ya dika onyinyo nke nwa agbada. Ka o sina dị, oge a, stylists dị mma iji mepụta anya na nwanyị na-alụ ọhụrụ, na ọ bụghị nanị na nkọwa a adịghị emebi, ma ọbụna na-eme ka ihu nwa agbọghọ ahụ lụọ.
Ya mere, na-achọ ihe omimi na nke ohuru na oyiyi nke nwa agbọghọ na-eto eto, ị nwere ike ịtọ ntutu isi ya na nnukwu mkpuchi ndị na-enweghị isi, wee kpoo ha ma mee ka ha dị mma ma ọ bụ ịkwa mma. Ụdị nke na-esi na styling ma na-anọgide n'ihu ihu, ọ dịghị mkpa ka ha dị ọcha - ha ga-enye onyinyo nke nwa agbọghọ a mara mma pụrụ iche ma ga-emesi ntorobịa ya ike.
Agbamakwụkwọ edo edo 2018 na bangs
Iji mepụta ihe mara mma na nke dị egwu maka agbamakwụkwọ, oge a adịghị mkpa iji wepụ bangs ma ọ bụ kpochapụ ya. Ka ọ dị ugbu a, n'ọtụtụ ọnọdụ, a ghaghị imezi ihe a na-ele anya anya. N'ihi ya, a ghaghị ịkpụcha ma gosipụta ya n'ememe tupu ememe ahụ, dị ka ọ ga-abụ nke ọma, ma ọ bụghị oke.
Ụdị edozi agbamakwụkwọ ọ bụla, 2018, ya na mmachi ya ga-emesi ụdị onye nwe ya ike ma wepụ ya na ìgwè mmadụ ahụ. Site n'enyemaka nke mmewere a, ị nwere ike ịgbanwe onyinyo gị ngwa ngwa - ogologo oge dị iche iche na-agbada n'ime akụkụ abụọ, nke na-agbatị ya na azụ dị mma n'azụ azụ, na onye na-atụ egwu na-agba ọsọ n'akụkụ ihu.
Agbamakwụkwọ edo edo edo edo 2018 na ajị anụ
Na bang otu n'ime isi ihe nke oge na-abịa abịa aghọwo ajị anụ, na-enye ntutu isi dị ka olu. Otutu edozi isi maka agbamakwụkwọ nke 2018 ka enyere ya aka, ya mere, o ji admirably akwado nnukwu curls e bulitere n'elu, na ụdị dị iche iche nke ịcha mma na-eme ka ọ dịkwuo mma ma gosipụta ya. Ke adianade do, n'ihi na ndị hụrụ ntutu ntutu isi na-akwadebe ihe ọhụụ na-adọrọ mmasị - isi isi na-ekpuchi na isi isi, na-ejikọta ya na mmachi anya.
Agbamakwụkwọ edozi agbamakwụkwọ 2018
Dị ka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ndị ọzọ 2018, ụyọkọ ahụ dị mma ma mara mma. Na oge a, ọ nwere ike ịdị ezigbo ụtọ ma ọ bụ dị ntakịrị na-ekpochapu, site na nke eriri nwere ike ịmalite. Ọ bụrụ na curls anaghị enwe oke olu, ha nwere ike ịbịaru ọnụ iji mepụta akwa edozi. N'afọ 2018, a pụrụ ịmepụta ihe ndị dị otú ahụ na combs ma ọ bụ ntutu isi, ndụ ma ọ bụ okooko osisi. Tụkwasị na nke a, ihe kachasị mkpa ga-abụ ihe dị elu nke na-eme ka ọkpụkpụ mara mma.
Agbamakwụkwọ edo edo na ntutu isi 2018
Maka ụmụ agbọghọ ndị na-ahọrọ ịdị mma na ezi uche, agbamakwụkwọ edo edo edo 2018 na curls dị ọcha dị mma. Ụkpụrụ ndị dị na oge a abụghị ihe niile dị mkpa, ya mere, a na-adụkarị ndị na-edegharị aha ha ka ha gwuo ha ma jiri ha mma ma ọ bụ okooko osisi ọhụrụ. Iji mee ka onyinyo ahụ zuru ezu ma kwekọọ, a ghaghị iburu n'obi na agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke oge 2018 na curls dị ọcha na ngwakọta dị mma .
Ihe ịchọ mma maka edo edo edo edo 2018
Ebe ọ bụ na ụdị uwe edo edo edo edo edozi 2018 na-atụ aro maka ịdị mma na ọchịchọ maka ịdị mfe, ọdịdị yiri nke a nwere ike ịkọwa na ihe ndị dị na ntutu isi. Ya mere, na oge a, nkwekọrịta minimalistic, ụdị nlezianya dị iche iche, nke ọma na edoghi nkọwa ndị na-enweghị isi na-anabata nke ọma.
Ruo ugbu a, ọla ahịa na ọla ahịa na-enye ọtụtụ ihe dị iche iche nke a pụrụ iji mee ka edozi isi ejiji. Ndị a na-enweghị obi ike na afọ a bụ ihe eji achọpụta ihe dị iche iche dị iche iche na rhinestones - twigs, wreaths, scallops and so on. Mgbochi ígwè na ntinye bụ ihe na-adọrọ mmasị na nke mbụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-ewu ewu pel kachasị mma - a na-eji ejiji, ntutu na ọtụtụ ihe mma.
Agbamakwụkwọ edo edo na agba okpueze 2018
Ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-ahọrọ iji mejupụta edozi ejiji ejiji maka agbamakwụkwọ ahụ n'afọ 2018 na njedebe mara mma nke na-enye nwa ọhụrụ nwanyị amara. Nke a dị mma dị ka okpueze, nke na-enye ohere ka nwa agbọghọ na-alụ nwanyị ọhụrụ nwee mmetụta dịka ezigbo eze. N'afọ 2018, a naghị anabata nnukwu ọnụọgụ buru ibu.
Ọ ka mma inye onyinye maka obere ihe, nke a na-achọ mma na ya. Dabere na mmasị onye ọ bụla na àgwà ndị ọzọ nke onyinyo ahụ, ndị na-eto eto na-eto eto nwere ike iji ihe a dị mma ma ọ bụ jiri aka ya nye ihe mkpuchi.
Agbamakwụkwọ edo edo 2018 na ákwà mkpuchi
Nye ọtụtụ ụmụ nwanyị mara mma, ákwà nhicha ahụ bụ ihe dị mkpa nke onyinyo nke nwanyị a, n'ihi na ọ na-egosi nwata ahụ, ọ dị ọhụrụ na ịdị ọcha nwa agbọghọ ahụ na-alụ. Uwe eji edo edo edo edo edo edo edo edo 2018 ga - egbochi ihe ndi o choro na ihe ndi choro nke umu umuaka nile - ngwa a nwere ike icho mmachi di iche iche, ihe mara mma, ma obu ihe ndi mara mma. E kwesịrị ichebara nlezianya anya n'ogologo ákwà mkpuchi - ọ gaghị adị mkpụmkpụ ma ọ bụ ogologo oge, nhọrọ kachasị mma bụ nke na-eru na njedebe nke ube.
Sneakers 2018 - ejiji ejiji, agba, ụdị kachasị mma
Eji uhie uhie na akara uhie
Ebumnuche maka sheikhc
Ga - - mmiri-okpomọkụ 2014
Akara ejiji 2014
Ịkpụ ntutu 2014
Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ụmụaka 2013
Uwe ejiji nke nwanyi 2013
Uwe ejiji maka ndi nwanyi di ime 2014
Jaketị - ejiji, ụbịa-oyi na ọnọdụ 2016-2017
Ụmụ nwanyị Na-akpa Mmiri 2014
Kedu ihe bụ ejiji na 2015?
Nkwurịta okwu mgbe baptizim nwatakịrị ahụ gasịrị
Esi esi esi nri kranberị?
Ntụziaka maka kabeeji jupụtara na-apụta na minced anụ
Okwute ụkwụ ụkwụ ụkwụ
Nri Afọ Ọhụrụ - nri nri na tebụl Afọ Ọhụrụ
30 foto, nke ị ga-ahụ obi ụtọ na ụdị ya dị ọcha!
Green tii milky oolong tii
32 "marasmus" na-echere gị na akwụkwọ ụmụ akwụkwọ nke oge a!
Salad si nnu salmon
Kedu ihe ị chọrọ ịma banyere nwanyị dị ime?
Azalia Banks bịara na ihe ngosi ejiji na-enweghị ebe
Akwukwo ahihia site na ata
Ezi anụ ezi - Ezi ntụziaka
Kedu esi akụ Clematis n'oge mgbụsị akwụkwọ?
Otu nwaanyị mgbe afọ iri ise gachara
E buliri Hematocrit - gịnị ka ọ pụtara na otu esi edozi ọbara?
Uro Oke Bactroban
Kedu ihe ị ga-eme mgbe enweghị ihe ọ bụla ị ga-eme?
Achịcha carrots - caloric ọdịnaya
Nkọwapụta ederede maka icho mma n'èzí